Ciidamda Ammaanka Kenya oo Soo Gabagabeeyay howlgalkii Jaamacada Garissa “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ciidamada Ammaanka ee dalka Kenya ayaa soo gabagabeeyay howlgalkii ay ka wadeen jaamacada magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi-Bari Kenya,kaasi oo qaatay mudo 16-saacadood ah.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph Nkaissery oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garissa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay soo gabagabeeyeen howlgalkii ay ka wadeen jaamacada Garissa.
Joseph Nkaissery oo ilaa saaka ku sugnaa magaalada Garissa ayaa sheegay in howlgalka ay ku dhinteen 147-qof,iyadoo aan la xaqiijin inta qof ee ku dhaawacantay.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ay dileen afartii qof ee saaka aroortii soo weerartay jaamacada magaalada Gariisa.
Wasiirka arrimaha gudaha Joseph Nkaissery ayaa sheegay in 500 oo arday oo ay soo badbaadiyeen ciidamada lagu haayo caawo xero ay leeyihiin ciidamada,iyadoo la siiyay meel ay seexdaan iyo wax ay cunaan.
Saaka aroortii ayaa kooxo hubeysan waxa ay soo weerareen jaamacada magaalada Garissa xili ay ku jireen ku dhawaad 800 oo arday oo wax ka baraneysay jaamacada.